A ga -egosiputa OnePlus 7 Pro na Mee 14 na New York | Androidsis
A ga-enye OnePlus 7 Pro na May 14 na New York
Anyị na-ekwu okwu banyere ọnụ na-esote n'aka onye nrụpụta OnePlus, onye na-emepụta ihe na ekele maka ọmarịcha ọrụ ọ rụrụ na 6T mere ka ọ nweta niche dị mkpa na ahịa America n'etiti ekwentị mkpanaaka.
Dị ka onye ọrụ ibe m bụ Eder gwara gị, taa Tuesday emeputa ka eze mara ọkwa mgbe ihe omume ga-eme ọgbọ na-esote ọnụ site na onye nrụpụta a. Ọ ga-abụ na Mee 14 na-esote na New York City, ihe omume anyị ga-agwa gị ozugbo.
Na òkù o zigara na mgbasa ozi, ọ na-ekwu naanị banyere OnePlus 7 Pro, ọ nweghịkwa ebe a kpọtụrụ aha OnePlus 7, ihe atụ na tiori ga-adịkwa na mmemme ahụ, belụsọ na ụlọ ọrụ Asia Decided kpebiri ịgbanwe aha gị naanị ọnụ site na ịgbakwunye aha nna Pro na nọmba ị nyere anyị ruo ugbu a.
N'adịghị ka ihe ndị mere n'oge gara aga, OnePlus chọrọ ka mwepụta a bụrụ "ụwa dum." Mgbe isi ihe ga - eme na New York City, ụlọ ọrụ ahụ ga-eme ihe omume atọ n'otu oge na obodo ndị ọzọ dịka London, Bangalore na Beijing.
Nkọwapụta igwefoto OnePlus 7 Pro
Fewbọchị ole na ole gara aga, onyeisi ụlọ ọrụ ahụ, Peter Lau, kwuru na N'ajụjụ ọnụ ya na The Verge, na ihuenyo nke ọgbọ ọhụrụ OnePlus 7 ga-adọrọ mmasị, ma akpọghị nkọwa ọ bụla nwere ike inye anyị ntụnye aka. Dị ka ụfọdụ asịrị si kwuo, ihuenyo ahụ nwere ike inye 90 Hz ume, ọ bụ ezie na ọ gaghị abụ ihe ọhụrụ n'ahịa ebe ọ bụ na ndị nrụpụta ndị ọzọ na-enye ọnụ ọgụgụ ume ọhụrụ na ekwentị ha.
Ihe doro anya doro anya bụ na ụdị ọhụụ a ga - adị oke ọnụ karịa nke ndị gara aga, ihe na - eme nwute na ọ bịara bụrụ nke a na-ahụkarị na afọ ndị na - adịbeghị anya yana n'oge ahụ adịghị ka ọ gbanwee. Ihe doro anya na ọdụ ọhụrụ a agaghị enye, ọ bụrụ na anyị a attentiona ntị na nkwupụta nke kachasị ọrụ, bụ na ụdị ọhụụ a bụỌ ga-aga n'ihu na-enweghị na-enye a wireless Nchaji usoro.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » A ga-enye OnePlus 7 Pro na May 14 na New York
Gaghị eche n'echiche ihe ọ ga - ekwe omume ịmeghe Nokia 9 Pureview
Fortnite rụkọtara ọzọ na Marvel na ndị ọbọ: Endgame